Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हङकङमा पुनः प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप – Emountain TV
सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा हङकङमा पुनः प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप
एजेन्सी, २७ साउन । हङकङमा पुनः प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको छ ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएकाहरु र प्रहरीबिच आइतबार राति झडप भएको हो । सरकारविरुद्ध विगत १० हप्तादेखि प्रदर्शन गर्दै आएकोहरुको ठूलो समूह शहरमा प्रवेश गरे लगत्तै उनीहरुलाई रोक्न चाहेको प्रहरीसँग झडप भएको हो । प्रहरीले रेलवे स्टेसनसहित पूरै शहरभर अश्रु ग्यास प्रहार गरेको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । वान चाई जिल्लामा प्रदर्शनकारीले प्रहरीलाई लक्षित गरेर पेट्रोल बम तथा इट्टा प्रहार गरेका थिए ।
त्यसको जवाफमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि लाठी प्रहार गरेको हो । झडपमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी तर्फ धेरै घाइते भएको जनाइएको छ । प्रहरीले रबरका गोली पनि प्रहार गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको सुपुर्दगी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन दुई महिना भन्दा बढी समयदेखि जारी छ । प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको भए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन ।